लन्डनमा शर्मिलाको कुसुमे रुमाल….[भिडियो] – News Portal of Global Nepali
लन्डनमा शर्मिलाको कुसुमे रुमाल….[भिडियो]
31st January 2018 मा प्रकाशित
लन्डन–लन्डनबाट “कुसुमे रुमाल” सार्वजनिक भएको छ।
प्रवासमा रहेर लोक सस्कृतिको उजागर गर्दै आएकी गायिका शर्मिला पछाईं थापाको भर्खरै नयाँ गित कुसुमे रुमाल’ सार्वजनिक भएको छ । गितमा समावेस गरिएको सब्द चयनले धेरै संगीत पारखीहरुको मन जित्न सफल भएको छ । प्रवासी जीवन आफैमा कस्टकर रहिरहँदा पनि थापा निरन्तर लोक सस्कृतिको उजागार गर्ने हेतुले खटिने प्रवासी गायिका हुन।
सामाजिक कार्यमा छवि बनाउनुभएकी समाजसेवी शर्मिला पछाईं सांगीतिक क्षेत्रमा पनि अगाडि बढ्नु भएको छ । आफ्नो कलालाई नयाँ(नयाँ ढंगले प्रस्तुत गर्ने र संस्कृति झल्काउने माध्यम रहेको गीत संगीतमा प्रवेश गरेसँगै पछाईंले सकारात्मक प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ ।
बिगत १० बर्ष देखि बेलायतमा बस्दै आउनुभएकी समाजसेवी पछाईले ‘कुसुमे रुमाल’को कभर गीत गाउनु भएको हो ।
बेलायतमा पहिलोपटक आयोजना गरिएको मिसेस नेपाल यूके प्रतियोगितामा १६ प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै ‘मिसेस नेपाल यूके २०१७’ प्रतियोगिताको पब्लिक चोइस उपाधि विजेता पछाईंको कभर गीतको म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।
कोरोना पीडितको लागि आर्थिक सहयोग व्यक्तिगत खातामा जम्मा नगरौं : एनआरएनए
प्रा. सुवेदीलाई बेलायतको हल विश्वविद्यालयको महाविद्यावारिधि
१५०६६	पटक पढिएको
८८५५	पटक पढिएको